UNieves Herrero: "Angazi ukuthi ngingaqamba kanjani, ngingakutshela kuphela engikutholile" | Izincwadi Zamanje
UJuan Ortiz | 12/08/2021 21:20 | I-Biography, Amabhuku, I-Novela
Lapho ubuza kuwebhu mayelana ne- "Nieves Herrero Libros", imiphumela ikhomba kunoveli yakamuva kaMadrilenian: Lezo zinsuku eziluhlaza okwesibhakabhaka (2019). Lokhu kulandisa okungokomlando kweza isimanga esikhulu emhlabeni wezincwadi, futhi kwajabulela imibono ehlukahlukene kubagxeki. Emsebenzini, umbhali usiphinda futhi asinikeze uzungu olunama-protagonists angempela futhi okunongwe ngokuthinta okulula kwezinganekwane, lapho ephakamisa khona abesifazane besithonjana besikhathi esedlule.
Inoveli Leyo nyanga ephukile (2001) kwaba yisinyathelo sokuqala sikaHerrero ezincwadini. Ngemuva kwalokhu kuqala, abaseSpain kuvunyelwe engxoxweni no ILa Voz de Galicia ube ngumbhali wezindaba. Ngaleso sikhathi wathi: “Akukho engingakwenza, ngoba ngiyintatheli. Angazi ukuthi ngingaqamba kanjani, ngingasho kuphela engikuhlangabezane nakho, engikuzwile noma engikutsheliwe ”.
1 Izincwadi ezihamba phambili zikaNieves Herrero
1.1 Leyo nyanga ephukile (2001)
1.2 Inhliziyo yaseNdiya (2010)
1.3 Okufihlwa Amehlo Akhe (2013)
1.4 Njengokuthi bekungekho kusasa (2015)
1.5 Lezo Zinsuku Ezihlaza (2019)
2.1 Izincwadi zombhali
Izincwadi ezihamba phambili zikaNieves Herrero
Leyo nyanga ephukile (2001)
Yincwadi yokuqala kaNieves Herrero. Yincwadi esekwe esehlukanisweni sezithandani zommeli waseMadrid, asebeneminyaka eyishumi nane bendawonye. Yize kuyindaba eqanjiwe, kuningi okwenzeka kumbhali kuyo; Mayelana nalokhu, wavuma: "... kwakucishe kube yindlela yokwelapha, ngoba kwakudingeka ngihumushe enganginakho ngaphakathi kokunye futhi ngagcwalisa amakhasi ngemizwa."
UBeatriz no-Arturo bashadile futhi banendodakazi eneminyaka emibili, UMonica. Ngaphandle kokukusola, owesifazane uthola ukuthi umyeni wakhe akathembekile kuye, isimo esiwuqeda ngokuphelele. Ngakho-ke, unquma ukufaka ngokushesha isimangalo sesehlukaniso bese ecela ilungelo lokugcina indodakazi yakhe encane. Yikhonjiswa ngokuningiliziwe inqubo yokwehlukana nokudumala kukaBatriz, ophethe ezokuvikela kwakhe.
Leyo nyanga ephukile
Inhliziyo yamaNdiya (2010)
Kuyinto inoveli ye-adventure nezothando ene-as protagonista a ULucas Millán. Lona ubhekana nengozi embi kakhulu futhi kufanele afakelwe ngokushesha ngangokunokwenzeka. Njengoba umnqamulajuqu wokuhlinzwa usuzofika, odokotela bathola inhliziyo yale nsizwa. Ukungenelela kwenziwa ngaphandle kokusola nokuthi imvelaphi yalesi sitho izothinta impilo kaLucas.
Inqubo ibe yimpumelelo. Kodwa-ke, ngenkathi insizwa ilulama iqala ukuba nezinkumbulo ezingajwayelekile nemizwa engaqondakali. Ngokushesha, uthola ukuthi konke kuhlotshaniswa nenhliziyo ayitholile - ingeyomdabu waseMelika - futhi ngenxa yalokhu kufanele afeze umsebenzi obalulekile. Ngasikhathi sinye, udabukile phakathi kwezithandani ezimbili, lowesifazane osempilweni yakhe nalowo inhliziyo yakhe emufisayo, okude kakhulu naye.
Inhliziyo YaseNdiya (Usana ...
Okufihlwe ngamehlo akhe (2013)
Lokhu kulandisa ngothando oluyimfihlo phakathi kweMarchioness Sonsoles de Icaza kanye nongqongqoshe uRamón Serrano Suñer Umlamu kaFranco. Zombili lezi zibalo zazibalulekile esikhathini sangemva kwempi eSpain, emikhakheni yezenhlalo nezepolitiki. Le noveli yashintshwa yaba yi-miniseries ngo-2016, yasakazwa yiTelecinco futhi yalingisa uBlanca Suárez, uRubén Cortada noCharlotte Vega.
Indaba iqala nini UCarmen - indodakazi yabalingiswa abakhulu- uhlangana nentatheli u-Ana Romero, obhala imemori yakhe. Endabeni yakhe Utshela ukuthi wathola kanjani ukuthi uMarquis Francisco Diez de Rivera wayengeyena uyise nokuthi wayengumkhiqizo wobudlelwano phakathi kukanina noRamón Serrano Suñer. Ngokwengeziwe, uchaza ukuthi - kamuva - wabhekana kanjani nokuthandana nomfowabo uqobo.
Khona-ke, ukulandisa kuya ku-1940, lapho embuthanweni womphakathi ophakeme USonsoles uyazi kungqongqoshe obalulekile wamaFrancoist URamon USerrano Suñer. Zombili zi-mesmerized futhi baqala ukuthandana ngomfutho ngasese. Ngemuva kweminyaka emibili yokushisekela, amahemuhemu obudlelwano babo agcwala emigwaqweni yaseSpain, isimo lapho uFranco ahlukanisa khona umlamu wakhe nehhovisi.
Okufihlwa Yibo ...
ngathi uma kusasa ingekho (2015)
Kuyinto a inoveli esuselwa endabeni yothando que kwakukhona phakathi komlingisi u-Ava Gardner kanye nomlwi wezinkunzi waseSpain uLuis Miguel Dominguín. Lesi sakhiwo sifaka ubudlelwane bokuqina bombhangqwana oholayo, ngaphezu kweminye imininingwane yempilo yabo yangasese. Ngendlela efanayo, kukhonjiswa iqiniso leSpain ngaphansi kobushiqela bukaFranco, ngemuva kweminyaka engaphezu kweyishumi ngemuva kokuphela kweMpi Yombango.
Okudumile U-Ava Gardner ufika eSpain ezophumula ngemuva kwefilimu yakhe yakamuva. Njengamanje, unezikhathi eziningi ezihle nomyeni wakhe -uFrank Sinatra-, ngakho-ke izinsuku ezimbalwa eMadrid zingamlungela. Yisikhathi sonyaka lapho konke iqhakaza, indawo evumayo ehamba phambili ukuvutha kothando nothando phakathi komlingisi noLuis Miguel ngemuva kokuhlangana nombono wabo okokuqala.
Sengathi bekungekho ...
Lezo zinsuku eziluhlaza okwesibhakabhaka (2019)
Kuyinto inoveli yakamuva yombhali. Embhalweni kunjalo ulandisa indaba yembongi nombhali wemidlalo uPilar de Valderrama. Itulo lembula imfihlo engafani nalutho: le ntokazi, nayo uqobo, nguGuiomar, umnyuziyamu we U-Antonio Machado. Isihloko somsebenzi sivela esiqeshini senkondlo esatholakala kusudi eyayigqokwe abaseSpain ngosuku lokufa kwakhe, futhi efundeka kanje: "Lezi zinsuku eziluhlaza okwesibhakabhaka, leli langa lobuntwana."
UHerrera uthintwe ngu-Alicia Viladomat - umzukulu kaPilar - obefuna ukuthwebula izinkumbulo zikagogo wakhe ngezizukulwane ezizayo. Kule ndaba ende, Kuchazwa indlela imbongi esencane — ngemuva kokuzwa ngokungathembeki komyeni wayo — ethatha ngayo isinqumo sokuhamba ayobona amakilasi noMachado. Lapho behlangana, bobabili bezwa ukuxhumana okujulile, futhi lolo thando lweplato lwakhuthaza izinkondlo eziningi zombhali.
Lezo zinsuku eziluhlaza okwesibhakabhaka (MAXI)
Intatheli nomlobi waseSpain uNieves Herrero Cerezo wazalwa ngoMashi 23, 1957 eMadrid. Ngo-1980, waphothula iziqu ze-Journalism e-Complutense University of Madrid. Eminyakeni engamashumi amabili kamuva, waphothula njengommeli e-European University of Madrid. UHerrero unomlando omude emhlabeni wobuntatheli, cishe iminyaka engama-35 esebenza.
Ukucaphuna kukaNieves Herrero
Ngesikhathi somsebenzi wakhe uhambe imidiya eyahlukahlukene, eminye yayo: I-Antena 3 Radio, TVE, RNE, Telecinco ne-Onda Madrid. Ngaphezu kwalokho, kugqamisa ukungenelela kwakhe ezinhlelweni ezahlukene emsakazweni nakumabonakude, onikezwe wona ngezikhathi ezahlukahlukene. Njengamanje, uyaqondisa futhi anikeze IMadrid Direct por IMadrid igagasi futhi usebenzisana ku Ihora le-1 Esiteshini I-1
Kusukela ngo-2001, uhlanganisa umsebenzi wakhe wobuntatheli nezincwadi, umkhakha ophinde waveza umsebenzi ophumelelayo. Ngezincwadi eziyisishiyagalombili, umbhali waseSpain uzuze amakhulu abafundi, abajabulela izindaba zakhe ezithokozisayo neziyingqayizivele. Imisebenzi yakhe eminingi isuselwa ku- iziza zomlando ehlotshiswe ngamanga, phakathi kwabo kuvela: Okufihlwe ngamehlo akhe (2013).
Ngesikhathi somsebenzi wakhe, uNieves Herrero ubedume ngokukhulisa abesifazane. Ngakho-ke, iningi lezindaba zakhe zenziwa ngabesifazane. Futhi Ubhalile yedayari El emhlabeni izingxoxo ezingaphezu kwekhulu ezibiziwe: "Yedwa nabo ...", ezenziwa kwabanye besifazane ababaluleke kakhulu emphakathini waseSpain.
inyanga ephukile (2001)
Konke kwakungelutho, uLeonor. Kuzalwa indlovukazi (2006)
Lezo zinsuku eziluhlaza okwesibhakabhaka (2019).
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » UNieves Herrero: izincwadi